Dowlada Soomaaliya oo taageertay go’aankii uu Sacuudiga xiriirka ugu jaray Canada
arlaadi August 8, 2018 No Comments
Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa teegeertay go’aanka ay boqortooyada Sacuudiga xiriirka ugu jartay dalka Canada kadib markii ay dowlada Canada ka dalbatay Sacuudiga inuu xoriyadooda dib ugusoo celiyay shaqsiyaad Sacuudi ah oo u ol’oleeya arimaha bulshada kuwaasoo ay Sacuudiga xirtay dembiyana kusoo oogtay.
War saxaafadeed ku qornaa Afka Carabiga kanasoo baxay wasaarada arimaha dibada Soomaaliya ayaa lagu taageeray Sacuudiga xiriirkii diblomaasiyadeed ee uu u jaray Canada.
“Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay si dhow ula socotay xaaladihii ugu dambeeyay ee ku soo kordhay xiriirka Dowladda aanu walaalaha nahay ee Boqortooyada Sucuudi Carabiya iyo Canada” ayaa lagu yiri war saxaafadeedka.
“Iyadoo laga ambaqaadaayo arrinkani, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay adkeyneysaa taageeridda mowqifka diidmada ee Dowladda aanu walaalaha nahay ee Boqortooyada Sucuudi Carabiya ee faragelin dibadeed oo lagu sameeyo arrimaheeda gudaha, iyadoo la tixgelinayo mabda’a aan oggolaanayn faragelin ee lagu caddeeyay Axdiga Qaramada Midoobay, oo ay ku jirto gobonnimadeeda iyo madax bannaanida go’aan gaariddeeda iyo waxa ay jideyso oo ah siyaasado ama habab garsooreed oo xiriir la leh shuruucdeeda qaran.” ayaa lasii raaciyay war saxaafeedka.
Dowladii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa horay u taageertay Sacuudiga kadib markii uu xumaaday xiriirka kala dhexeeyay dalka Sweden ayada oo ay Soomaali badan la yaab ku noqotay arintaas maadaama laba dowladood xiriirkooda oo lasoo dhex galo aanay wanaagsanayn.